Boqor Buur-Madow oo 3sano oo xarig ah Maxkamada Hargaysa ku xukuntay. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Somaliland / Boqor Buur-Madow oo 3sano oo xarig ah Maxkamada Hargaysa ku xukuntay.
May 20, 2018 - By: Mohamed Dahir
Maxkamadda Magaaladda Hargaysa ayaa 3 sano ku xukuntay Boqor Cismaan Aw Maxamuud (Buur-Madow),boqorka ayaa lagu soo eedeyey inuu ka qaybgalay caleema saarka Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaciil oo ka mid ah saladiinta dhaqanka ee Puntland iyo inuu ku been abuurtay Madaxweynaha Soomaaliland Muse Biixi Cabdi.
26 bishii Abril 2018 ayey ahayd markii maxkamadu ku riday Boqorka 5 sano oo xarig ah,waxaana uu xiligaas maxkamada ka qaatay Racfaan waana laga aqbalay,dib ayaa loo furay dacwadiisa waxaan manta lagu soo afmeeray dacwadii loo haystay Boqorka dhagaysi ka dib in lagu xukumo 3 sano oo xarig ah.
Boqor Cismaan waxaa ka midyahay isimada dhaqanka ee Somaliland ,waxaana uu kamidyahay saladiinta dhaqanka ee aadka looga yaqaan qaybaha Soomaaliya ay ka koobantahay,waxaa xililyo kala duwan arintiisa kala hadlay hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida wallow aanay xukuumada Biixi dhag jalaq u siin codsigaas.